महिनावारीमा देखिने रगतको फरक रङको संकेत के ? - Civil Khabar
by civilkhabar २०७८ आश्विन ७, बिहीबार १३:२३ 0
हरेक किशोरीहरुमा एउटा उमेरपछि महिनावारी चक्र सुरु हुन्छ । महिनावरी चक्र सुरु भएपछि किशोरीहरुमा विभिन्न परिवर्तहरु आउँछन् । कुनै–कुनै किशोरीहरुमा पीडा र चिडचिडापन पनि हुन्छ । महिनावारी हरेक महिना हुन्छ । महिनावारी सही समयमा हुनुलाई स्वस्थ हुनुको प्रतिक मानिन्छ ।
महिनावारी चक्र हरेक २५ देखि २८ दिनभित्र पूरा हुन्छ । सामान्यतयाः महिनावारीको समयमा रातो रगत बग्छ । महिवारीमा शरीरभित्र भएको फोहोर रगत बाहिर जाने भएकाले यसको रङ रातो हुन्छ । तर, कहिलेकाँही यसको रङमा परिवर्तन आउन सक्छ । जस्तै, कालो, गुलाबी र हल्का खैरो रङको रगत देखिन सक्छ । महिनावारीको समयमा देखिने रगतको रङले महिलाको स्वास्थ्यको बारेमा विभिन्न संकेत गरिरहेको हुन्छ ।
रातो रङको रगतसँगै सुन्तला रङको रगत देखिनु भनेको संक्रमणको संकेत हो ।साभार / रातोपाटी
विजयादशमीको टीकाको उत्तम साइत कुन देशमा कति बजे ?
civilkhabar २०७८ आश्विन १५, शुक्रबार १३:१२
बुधबार थप ७ सय ४३ जनामा कोरोना पुष्टि, ९ सय ५२ निको भए
civilkhabar २०७७ पुष ८, बुधबार १६:२९ २०७७ पुष ८, बुधबार १६:३०
नेपालमा कोरोनाबाट थप तीन जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या ४८ पुग्यो
civilkhabar २०७७ श्रावण १२, सोमबार १७:०४